သမ်းပါ။ အားရပါးရ သမ်းလိုက်ပါ။ - Hello Sayarwon
သမ်းပါ။ အားရပါးရ သမ်းလိုက်ပါ။
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 23/08/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဟာ …… တစ်ချိန်လုံး သမ်းနေတယ်၊ အိပ်ရေးလည်း မပျက်ဘဲ ဆိုတဲ့သူလေးတွေရှိလား။ ဒီ တစ်ခေါက်တော့ ဘာကြောင့် သမ်းရတာလဲ ဆိုတာနဲ့။ သမ်းခြင်းကနေ ဘယ်လိုမျိုး ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်လဲ ဆိုတာကို ပြောပြပေးသွား ပါမယ်။
ဘာကြောင့် သမ်းရတာလဲ ……….
သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာထားတဲ့ သီအိုရီတွေအရ သမ်းတယ်ဆိုတာက ဦးနှောက်ရဲ့ အပူချိန်ကို ထိန်းညှိတာပါ။ လူတွေဟာ ပြင်ပက ရာသီဥတု အေးနေချိန်တွေထက် ပြင်ပမှာ ရာသီဥတု ပူနေချိန်မှာ ပိုပြီး သမ်းတတ်ကြပါတယ်။ ဦးနှောက်မှာ အပူချိန် မြင့်တက်လာတဲ့အခါ အပူချိန်ကို လျှော့ချဖို့ လေရှူသွင်းရပါတယ်။ ဒီလို အပူချိန် လျှော့ချဖို့ အတွက် လေ ရှူသွင်းဖို့ လိုအပ်ချိန်မှာ သမ်းရတာပါ။
သမ်းနေပြီဆိုရင် သိဖို့က ပျင်းလို့၊ အိပ်ချင်လို့ ဆိုတာထက် ဦးနှောက် အပူချိန် လျှော့ချဖို့ လိုနေတယ်၊ လို့ ဖော်ပြနေတာပါ။
သမ်းတာကို သက်သာစေဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ……
တအား သမ်းနေပြီ ဆိုရင် သမ်းဝေနေတာကို သက်သာစေဖို့အတွက်
အရမ်း သမ်းနေပြီလို့ ခံစားရတဲ့အခါ နှာခေါင်း ကနေ လေကို ဝအောင် ရှူသွင်း ရှူထုတ် လုပ်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်က ဒီလို အချိန်မှာ အောက်ဆီဂျင်ကို ပိုမို လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ အသက်ရှူနှုန်း ကျလာချိန်မှာလည်း သမ်းဝေတတ်ပါတယ်။
တောက်လောက် အလုပ်လုပ်နေတာကို ခဏ နားပြီး သက်တောင့် သက်သာနေတာကလည်း ဦးနှောက်ကို အနားပေးတာပါ။ အရမ်း ပင်ပန်းလာပြီ၊ ပျင်းလာပြီ၊ တအား ဖိအား များနေပြီလို့ ခံစားရချိန်မှာ လူတွေက သမ်းတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ ဆိုရင် လမ်းခဏ လျှောက်တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။ ဒါက စိတ်ရော ကိုယ်ပါ သက်တောင့် သက်သာဖြစ်စေပြီး သမ်းတာကို သက်သာစေမှာပါ။
အရမ်းသမ်းနေချိန်မှာ ရေအေးအေးလေး သောက်ပေးတာ၊ အေးတဲ့နေရာလေးမှာ ခဏလောက် ထိုင်တာ၊ စိတ်ဖိစီးစရာတွေကို ခဏ မေ့ထားတာမျိုး လုပ်ပေးပါ။ ဒါတွေက အပူချိန်ကို လျော့ကျစေပြီး သမ်းတာကို သက်သာစေပါတယ်။
ရေအေးအေး မသောက်ချင်ဘူးဆိုရင် သစ်သီးဖျော်ရည် အေးအေးလေး ဒါမှမဟုတ် အအေးခံထားတဲ့ သစ်သီးလေးတွေကို စားပေးပါ။
သမ်းဝေတာက အခုလို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ဆီကို သွေးစီးဆင်းမှု ကောင်းစေတယ်
သမ်းလိုက်တဲ့အခါ လေကို တဝ ရှူသွင်းမိတာကြောင့် ဦးနှောက် အပူချိန် ကျဆင်းစေနိုင်သလို ဦးနှောက်ဆီသို့ သွေးစီးဆင်း ရောက်ရှိမှု ကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက်ဆီ သွေးစီးဆင်း ရောက်ရှိမှု ကောင်းတာက သိမြင်မှု စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေပြီး မှတ်ဉာဏ် ကောင်းစေသလို စဉ်းစားဉာဏ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
သမ်းတာက ကော်ဖီ တစ်ခွက် သောက်သလောက် နီးပါးကို ဦးနှောက်ကို လန်းဆန်း စေနိုင်ပြီး အာရုံကြောတွေကို နှိုးဆွပေးပါတယ်၊ လို့ လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါတယ်။
နားထဲမှာ သက်သောင့်သက်သာ မဖြစ်တာကို သက်သာစေပါတယ်
နားထဲက နာနေတယ်၊ နားထဲမှာ သက်သောင့်သက်သာ မဖြစ်ဖြစ်နေတယ်၊ လေယာဉ် စီးတာကြောင့် အကြားအာရုံ ပြဿနာ ခံစားနေရတယ်ဆိုရင် သမ်းကြည့်လိုက်ပါ၊ လို့ ပြောပါရစေ။ သမ်းတာက နားထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်နေတာတွေကို မြန်မြန် သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ သမ်းဝေတာက နားထဲက လေဖိအားကို ထိန်းညှိပေးရာမှာ အကောင်းဆုံး အထောက်အကူ ပြုပေးနိုင် ပါတယ်။
ဦးနှောက်ဆီ အောက်ဆီဂျင်​ ရောက်ရှိမှု ကောင်းစေပါတယ်
သမ်းတာက ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို အောက်ဆီဂျင်တွေ အများကြီး ရောက်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ သမ်းလိုက်တိုင်း အဆုတ်ထဲကို အောက်ဆီဂျင် များစွာ ရောက်ရှိစေပြီး အဆုတ်ထဲက ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေကို ပြင်ပကို စွန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်က အဆုတ်ကို ကျန်းမာစေသလို ဦးနှောက် ဆီကိုလည်း အောက်ဆီဂျင် ရောက်ရှိမှု တိုးစေပါတယ်။
Can Yawning Help With Your Nerves? https://www.refinery29.com/en-us/why-do-we-yawn-not-tired Accessed Date6July 2020
Facts About Yawning: Why We Do It, How to Stop, and More https://www.healthline.com/health/why-do-we-yawn Accessed Date6July 2020
4 amazing health benefits of yawning that will surprise you! https://www.thehealthsite.com/photo-gallery/diseases-conditions-amazing-health-benefits-of-yawning-that-will-surprise-you-v0316-376054/4-amazing-health-benefits-of-yawning-that-will-surprise-you-406060 Accessed Date6July 2020
သမ်း တာက ကူးတတ်လား
ဟင်းပြင်းပင် နဲ့ ကျန်းမာရေး